Mcommerce waxay hada ka koreysaa 200% Ecommerce | Martech Zone
Mcommerce waxay hada ka koreysaa 200% Ecommerce
Wednesday, September 21, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Ma xasuusataa shaygii ugu horreeyay ee aad ka iibsatay qalabkaaga gacanta? Si aad ah uma hubo markii aan iibsaday mobilka ugu horreeya, waxaan maleynayaa inuu ahaa mid ka mid ah taleefannada moobiilka ee loo yaqaan 'Amazon ama Starbucks'. Iibsiga moobiilku wuxuu lahaa dhowr xadeyn - mid wuxuu ahaa sahlanaanta isticmaalka iyo tikniyoolajiyadda, midda kalena wuxuu si fudud ugu kalsoonaa macaamilka. Iibsashada moobiilku hadda waxay noqonayaan dabeecadda labaad, in kastoo, iyo tirakoobka ka socda Coupofy cadee.
Xaqiiqdii, halka ganacsiga elektaroonigga ah la filayo inuu koro 15%, ganacsiga mobilada ayaa la filayaa inuu kordho 31% sanadka 2017!
Dunida oo dhan, Japan, Boqortooyada Ingiriiska iyo Kuuriyada Koofureed ayaa hogaamiya koboc ku dhowaad 50% sanadki. Australia iyo Nederland waxay kobceen ganacsiga mobilada 35%.
Sannadkii 2015, shanta shirkadood ee ugu horreeya ee arkay koritaanka ugu badan ee ganacsiga moobiladu waa GOME Electrical Appliances oo leh 634%, Nebraska Furniture Mart oo leh 500%, Yihaodian oo leh 456%, VIPShop Holdings oo leh 451% iyo HappiGo oo leh 389%.
Shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya ganacsiga mobilka ee Mareykanka waa TicketMaster, Apple, Target, QVC iyo Kohl's (siday u kala horeeyaan). Waxaa la yaab leh, Amazon weli kuma jirin 5-ta sare! Dhamaan ganacsatadan ayaa arkay ilaa 50% koritaan taraafikada mobilada iyo iibka. Heer caalami ah, hogaamiyaha ganacsiga e-commerce Arbacada ah waxay sii wadaa inay diirada saarto u fududaynta macaamiisha inay wax ku iibsadaan taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada sida qiimaha wax ku iibsiga aaladahaas koray 21% sanad kasta.
Qiimaha Amarka Celceliska Gawaarida wali wey ka sarreeyaan Isticmaalayaasha Kiniiniga
The celceliska qiimaha dalabka oo ka mid ah dukaanka wax iibsanayaa waa $ 100 halka dukaameeyaha laga beddelayo taleefanka casriga ahi yahay $ 85 celcelis ahaan Sidoo kale, dadka wax iibsada ee mobilada ka soo iibsada taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone' ayaa lagu yaqaan inay leeyihiin dalabkooda qiimihiisu 22% ka hooseeyo dhiggooda macruufka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira seddex jibaar ka badan dukaamada qalabka Android. Taasi waa in ka badan inta ku filan si loo hubiyo in khibradaadu u shaqeyso dhammaan macruufka iyo Android.
Tags: Amazontufaaxacelceliska qiimaha dalabkafadhigaArbacada ahecommerceganacsiga caalamiga ahganacsiga caalamiga ahJapankohlsganacsiga gacantaqiimaha dalbashadaQVCSouth Koreastarbuckskiniin ka soo horjeedda qiimaha dalabka moobiilkabartilmaameedTicketMasterBoqortooyada Ingiriiska
5 Dariiqo oo Snapchat Loogu Adeegsan Karo In Lagu Dhiiri Galiyo Ganacsigaaga